Xeeladii Xaalmastuurka Kooxda Jwxo-shiil, oo Xaniban – Rasaasa News
Dec 25, 2011 oo Xaniban, Xeeladii Xaalmastuurka Kooxda Jwxo-shiil
Helzink, December 25, 2011 [ras] – Shir qorshihiisu ahaa xaalmastuur oo ay kooxda Jwxo-shiil, ku dooran lahayd gudoomiye geeya Jijiga, oo ka dhacayey maanta magaalada Helzink, ee dalka Finland, ayaa fashil ku dhamaaday.
Kooxda Jwxo-shiil, ayaa maanta waxay xubno iyo taageerayaal lahayd isugu gaysay Helzinki, si ay ugu doortaan gudoomiye xaalmastuur ah oo kooxda u galbinaya Jijiga.
Sida aan war ku helay, waxaa soo baxaya arimo ayna kooxdu filaynin oo ah in shakhsigii la rabay in xilka lagu wareejiyo ka hore inta ayna kooxdu Jijiga tagin uu ka baaqday kulka.
Bilooyin ka hor ayey ahayd, kolkii beesha Jwxo-shiil kulan ay isugutagtay, Dubai, kuna khasabtay Jwxo-shiil, in uu yeelo labo arimood mid uun; a) in hogaanka kooxda uu wareejiyo b) iyo in uu heshiis la galo Ethiopia.
Sida la sheegay Jwxo-shiil, wuu qaatay talada beesha, laakiin wuxuu xusuusiyey in ay jirto Haad hareera tuban oo u baahan in la qanciyo, wakhtiguna uu dheeraan doono.
Dan jirtaba, Jwxo-shiil, wuxuu tuugay masuuliyiin Somali Kenya ah in ay Ethiopia ugu ergeeyaan. Ergadii waxay soo celisay in sinaba ayna Ethiopia ula hadlayn Janan Jwxo-shiil, maadaama uu yahay Janan Somaliyeed isaga iyo kuwa kale oo sita dhalashooyin qalaad.
Jwxo-shiil, wuxuu u baydhay in uu xilka wareejiyo, waxayna ku qaadatay mudo in ay arintaasi ka dhacdo maanta Finland.
Maanta oo sabti ahayd ayaa lagu waday in shir ka dhacayey Helzink cod qorshaysan oo far taag ah lagu doorto Aw Cadaani in uu noqdo hogaanka kooxda Jwxo-shiil.
Hadaba, sida ay wararku sheegayaan Aw Cadaani oo la filayey in uu yimaado shirka Helzink, ayaa ka baaqday. Baaqashada Aw Cadaani, ayaan wali la ogayn waxa sababay, laakiin lugooyo wayn ku ah socdaalkii 7bada bilood soo jiitamayey ee ay kooxda ku tagi lahayd Jijiga.
Tagintaanka kooxdu waxba kama badala heshiisyadii hore ay dawlada Ethiopia ula galeen Jabhadaha WSLF iyo ONLF sanadkii 2010, xiligaas oo ay kooxda Jwxo-shiil diiday in ay heshiis qaadato.
Dad goob joog ahaa ayaa noo sheegay in isku day labaad uu ka dhici doono London hal ama labo todobaad ka dib kolka la hubsado waxa keenay in Aw Cadaani baaqdo.
Waxay xubnahaasi noo sheegeen in hadii uusan Aw Cadaani maanta baaqan lahayn ay kooxdu u dooran lahayd gudoomiye maxaliq ah, maalmo ka dibna uu shaacin lahaa in uu Ethiopia wadahadal u socdo.